काठमाडौं । संघीय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्र प्रसाद पण्डितले सहकारी संस्थाहरूले सरकारले व्यवस्था गरेको अनलाइन माध्यममा विवरण उपलब्ध गराउन नमानेको बताएका छन् । सहकारी संस्थाहरूले सफ्टवेयर चलाउन ...
techpana.com . ३४ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । चिनियाँ स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी साओमीले रेड्मी नोट ११ प्रो नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले आकर्षक क्यामेरा र छिटो चार्ज हुने ब्याट्री रहेको यो फोन नेपालमा ल्याएको हो । स्म...
काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन राख्न चाहनेहरूका लागि आवश्यक ट्रान्सफर्मर निःशुल्क उपलब्ध गराउन थालेको छ । टेकपानाको सहजीकरणमा शुक्रबार राजधानीको होटेल र्‍याडिसनमा आयोजित ‘इन्टरनेट से...
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीका तार भूमिगत गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका तारहरू भूमिगत गर्ने कार्य भइरहेको र यसले निकट भविष्यमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई समस्या पर्न...
सामाजिक सञ्जालहरु मध्ये युवा पुस्तामाझ चर्चित एक एप हो, स्न्यापच्याट । हरेक क्षणको अपडेट दिन मिल्ने, भिडियो, फोटो तथा च्याटका मार्फत कुराकानी गर्न मिल्ने हुँदा यो एप निकै चर्चित छ । टिकटक जस्तै फ...
काठमाडौं । कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्दा लगानी अर्थात पूँजीको कुरा आउँछ । तर फरिद अलीले शून्य लगानीबाट आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेर आज आठ जनालाई रोजगारी दिइरहेका छन् । १९ वर्षको उमेरमै एन्टी भाइरस सफ्टवे...
ब्रिटिस एक्रिडेसन काउन्सिल (बीएसी)को मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था द ब्रिटिस कलेज (टीबीसी)ले ‘इन्टरनेट अफ थिंग्स’ ल्याब स्थापना गरेको छ। शुक्रबार एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरि कलेजका विद्यार्थ...
अब सहज रुपमा पासवर्ड म्यानेजर सबै प्लेटफर्ममा प्रयोग गर्न सकिने
गूगलको पासवर्ड म्यानेजर अब सबै प्लेटफर्ममा सजिलै प्रयोग गर्न सकिने भएको छ । यसका गूगलले आफ्नो पासवर्ड म्यानेजरमा अपग्रेड गरिरहेको छ । नयाँ अपग्रेडसँगै गूगलको पासवर्ड म्यानेजर अझ बढी सुरक्षित हुने...
ictsamachar.com . ५ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं। मानिसहरूबीच सञ्चारको मध्यस्थकर्ताका रूपमा हाल सबैभन्दा लोकप्रिय माध्यम सामाजिक सञ्जाल हो।
काठमाडौं । गार्मिनले सोलारबाट समेत चार्ज गर्न सकिने फिचर सहितको स्मार्ट वाच सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले डेडिकेटेड जीपीएस भएको स्मार्टवाच फररनर ९५५ भारतीय बजारमा ल्याएको हो । कम्पनीले फररनर ९५५ सो...
techpana.com . ५ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । लिभिङ विथ आईसीटीको आयोजनामा सातौं संस्करणको आईसीटी अवार्ड हुने भएको छ । यसका लागि आजदेखि अनलाइन नोमिनेसन (आवेदन) खुलाइएको छ । यस संकरणमा विभिन्न ११ विधामा नोमिनेसन खुला गरिएको र अनलाइन ...
techpana.com . ७ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पोल भाडा तथा पूर्वाधार प्रयोगमा उठेको विवाद एक-अर्कालाई लान्छना लगाएर समाधान नहुने बताएका छन् । टेकपानाले शुक्रबार राजधानीमा ...
काठमाडौं । नोकियाले तीन दिनसम्म ब्याट्री टिक्ने नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले ‘नाेकिया जी ११ को’ प्लस भर्सन स्वरूप ‘नोकिया जी ११ प्लस’ सार्वजनिक भएको हो । यो फोनमा ९० हर्जको रिफ्रेस...
techpana.com . ८ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
ओपनशीको डेटा ब्रिचका कारण प्रयोगकर्ताहरुको ईमेल एड्रेस लिक
ओपनशीको डेटा ब्रिच भएपछि प्रयोगकर्ताहरुको ईमेल एड्रेस बाहिरिएको छ । अमेरिकाको एनएफटी मार्केटप्लेस कम्पनी ओपनशी डेटा ब्रिचको शिकार बन्न पुगेको हो । कोही पनि ओपनशी अकाउन्ट बाहक र न्यूजलेटर सब्सक्राइ...
ictsamachar.com . ८ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । जारी रुस-युक्रेनबीचको युद्धका कारण विश्वव्यापी रुपमा नै पेट्रालियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेकाे छ । पटकपटक हुने मूल्य वृद्धिका कारण पछिल्लो समय धेरैले इन्धनयुक्त सवारीको विकल्पमा विद्य...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले पोलहरूमा टाँगिएका अव्यवस्थित तारले सहर कुरुप देखिएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई यसको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेक...
techpana.com . ९ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
सुरु भयो सातौं आइसीटी अवार्डको अनलाइन नोमिनेशन, यी हुन अवार्डका ११ विधा
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको प्रतिष्ठित अवार्डको रूपमा परिचित आइसीटी अवार्डको सातौं संस्करणको अनलाइन नोमिनेशन आजदेखि शुरु भएको छ । लिभिङ विथ आइसीटीको आयोजना र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरा...
इन्टरनेट र फोन अबरुद्धभएपछि गोरखाको धार्चे गाउँपालिकाको सेवा खोर्लाबेशीबाट
गोरखाको धार्चे गाउँपालिकाको काम खोर्लाबेँसी सारिएको छ । माछाखोलास्थित गाउँपालिकाको कार्यालयमा इन्टरनेट नचलेपछि कार्यालयको काम खोर्लाबेँसीबाट सुरु गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । बिल भुक्तानीको चटा...
nayapatrikadaily.com . ९ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
इन्टरनेट सेवा ठप्प पार्न सरकारलाई ‘भिलियन’ बनाइयो: सञ्चार सचिव अर्याल
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई बेरुजु रकम तिर्न आग्रह गर्दा उल्टै सरकारलाई दोषी देखाइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले बताएका छन् । टेकपानाले शुक्रबार राजधानीमा ग...
en.setopati.com . १२ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
Student visas contributed significantly to the overall rise in visa application volumes: VFS Global With the opening of international borders and relaxation of travel restrictions, visa applicatio...
kathmandupost.com . १२ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
हाम्रो पात्रोले थाल्यो ई–लर्निङ प्याल्टफर्म
काठमाडौं । एप हाम्रो पात्रोले नयाँ फिचरका रूपमा ‘हाम्रो लर्निङ सेन्टर’ थालेको छ । एउटै एपमार्फत विभिन्न सेवा दिँदै आएको हाम्रो पात्रोले ‘डिरयवाक’ सिफल स्कुलसँगको सहकार्यमा बिटा भर्सनका रूपमा यो सुव...
नेपालमा पछिल्लो समय डिजिटल कारोबार मौलाउँदै गएको छ । कुनै समय लाइनमा बसेर बिजुली, खानेपानी लगायतको महसुल तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले केही सेकेन्डमै मोबाइलमार्फत रकम पठाउन सकिने भएको छ । अझ कोभ...
काठाडौं । बाल्ट्राको इन्डक्सन चुल्होमा आगलागी भएको पाइएको छ । काठमाडौं महाराजगञ्जमा चिया पकाउने क्रममा चुल्होमा आगलागी भएको हो । एक टेलिभिजनमा पत्रकार समेत रहेकी शारदा शर्माले करिब एक महिना अघि न...
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि साउन मसान्तभित्र विद्युतीय भोटिङ मसिन उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोगसम्बन्धी अध्ययन प्रतविदेन गृह मन्त्रालयमार्फ...
ट्रयाक गर्ने किसिमको यूआरएललाई मेजिल्ला फायरफक्सले हटाइदिने
मोजिला फायरफक्सले अब आफै ट्रयाक गर्ने किसिमको यूआरएललाई हटाउने भएको छ । यसले फेसबुक जस्ता एपहरुलाई अरू वेबसाईटमा ट्रयाक गर्नका लागि प्रतिबन्ध लगाउने छ । यूआरएलको अन्त्यमा हुने क्यारेक्टरहरुलाई मो...
ictsamachar.com . १ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
ऊ लोक सेवाकी विद्यार्थी हो उसलाई थाहा छ उत्तम विकल्पको महत्त्व र नकारात्मक अंकको महत्त्व पनि थाहा छ। मेरो जिन्दगीको उत्तम विकल्पमा पर्नु भएन छनोट गरेर गल्ती गरें भन्दै गएकी हो हिजो उसलाई उ...
setopati.com . १ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । अब भाइबरबाटै यति एयरलाइन्सकाे टिकट काट्न सकिने भएकाे छ । सेवाग्राहीलाई सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ कम्पनीले भाइबरसँगको सहकार्यमा याे सुविधा ल्याएकाे हाे । यसका लागि भाइबरमा पाँच ओ...
कुमारी जबद्वारा सञ्चालित “प्रोफेसनल एच आर ट्रेनिङ” सम्पन्न भएको छ । नेपालका विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाका अनुभवी र दक्ष व्यक्तित्वहरूरा प्रशिक्षण प्रदान गरिएको ट्रेनिङको यो पहिलो ब्याच हो । विभिन...
lokaantar.com . १ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । फेसबुकमा कतिपय प्रयोगकर्ताले आफ्नो प्रोफाइल लक गरेर राखेका हुन्छन् । त्यस्ता प्रोफाइलको फोटो सामान्य तरिकाले हेर्न मिल्दैन । प्रोफाइल लक गरेको व्यक्ति को होला भन्ने जिज्ञासा हामी सबैमा...
फेसबुकले ग्रुपका लागि डिस्कर्ड जस्तै अडियो च्यानल फिचरको जाँच गर्दै
फेसबुकले ग्रुपहरुका लागि डिस्कर्ड जस्तै अडियो च्यानल फिचरको जाँच गरिरहेको छ । ग्रुपहरुका लागि पहिले पनि फेसबुकको रुम भन्ने अडियो फिचर रहेको छ तर यो अडियो च्यानल फिचर हल्का भिन्न छ । रुम एकपटकको अड...
एलन मस्कले के साँच्चिकै ट्वीटर छोडेका हुन् ?
काठमाडौं । एउटा सक्रिय ट्वीटर प्रयोगकर्ता र सम्भवतः निकट भविष्यका ट्वीटर मालिक एलन मस्कले एक हप्तादेखि कुनै ट्वीट गरेका छैनन् । गत मंगलबार जन्मदिन परेका मस्क, १० करोड (१०० मिलियन) फलोअर पार गर्ने छ...
काठमाडौं । राइड शेयरिङ एप टुटलबाट एक हप्तासम्म सेवा लिन नमिल्ने भएको छ । एपमा राइड बुक गर्नेदेखि नयाँ अकाउन्ट रजिस्टरका सेवा चलेका छैनन् । टेकपानासँगको कुराकानीमा सिस्टम अपग्रेडको काम भइरहेको जान...
हाम्रो पात्रोबाटै अब कक्षा चारदेखि ११ कक्षासम्मका विषय पढ्न पाइने, सुरू भयो ‘हाम्रो लर्निङ सेन्टर’
आम मानिसको दैनिक जीवनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्न सफल नेपालको लोकप्रिय एप हाम्रो पात्रोले नयाँ फिचरको रूपमा ‘हाम्रो लर्निङ सेन्टर’ ल्याएको छ । एउटै एपमार्फत विभिन्न सेवाहरू दिँदै आएको हाम्रो पात्रो...